Recent articles – पुरु's कर्नर
Home » Archive by category "Recent articles"
By adhikarip 06, 26, 2018
के तपाइले कुनै विदेशी जर्नलका रिसर्च पेपर डाउनलोड गरेर पढ्न खोज्दा पैसा तिर्नपर्छ भनेको कारणले पढ्न पाउनुभएको छैन ? एउटा पेपर पढ्न ३००-४०० डलर सम्म तिर्न पर्ने भनेको वा संस्थागत लग इन गर भनेकाले त्यो पढ्न पाउनुभएको छैन ? हिनारीको पासवर्ड लाइब्रेरियनसंग माग्दा माग्दा दिक्क हुनुहुन्छ ? ल ढुक्क हुनुहोस यी सबै प्रश्नको समाधान यहाँ […]
Post Tagged with literature, research, science
प्रसङ्ग १: एउटा व्यस्त इमर्जेन्सीमा एक डाक्टर विरामी हेर्दैछ । अन्तिम अवस्थामा अस्पताल ल्याइएको विरामीको मुखमा पाइप हालेर कृत्रिम स्वाश्प्रश्वासबाट विरामीलाई बचाउने कोशिस हुदैछ । त्यसै वखतमा इमर्जेन्सीमा नयाँ विरामी ल्याइन्छ । तुलानात्मक रुपमा त्यो नयाँ विरामीको अवस्था त्यति सिकिस्त नभएकाले डाक्टरले एकछिन पर्खिन भन्छ र त्यो अर्को सिकिस्त विरामीलाई वचाउन आफ्नो सिप र ज्ञानले […]
Post Tagged with doctors, laws, nepal, salary
यो लेख कसैको पक्ष वा विपक्ष लिएर लेखिएको हैन । मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजमा घटेको प्रतिनिधी घटना र त्यसबाट सृजना भएको परिस्थिति, अनलाइन, पत्रपत्रिका तथा सामाजिक संजालमा आएका प्रतिक्रियाहरु देखेर चिकित्साक्षेत्रको एक विध्यार्थीको नाताले यस विषयमा केहि कुरा आम मानिसहरुमाझ राख्न जरुरी लागेर यो लेख लेखिएको हो । यो लेखमा राखिएको विचारहरु समाचारहरुमा आएका सामाग्री […]
Post Tagged with hospitals, media, vandalism, workplace_violence
सधैझै प्रसुति कक्षको अगाडी आज पनि उस्तै भिडभाड थियो । नौ बज्न केहि समय बाकि थियो, प्रसुति वार्डमा हिजो भर्ना भएका विरामीहरुको अवस्था खरर हेरेर भ्याएँ । सवा नौ बजेतिर बिहानको राउण्ड भयो । विरामीहरुको अवस्था हेरेर कसैलाई कुनै औसधी चलाउने, कसैलाई डिस्चार्ज गरेर घर पठाउने, कसैलाई भिडियो एक्स रे पठाउने निर्णय भयो । राउण्ड […]
यतिबेला नेपाली आकासमा हवाई दुर्घटनाको शृंखलामा अर्को एउटा दुखद घटनाले हामी सबैलाई मर्महात बनाएको छ । गोरखाको सिर्दिवास गाविस-२, फिलिमबाट विरामी लिएर काठमाण्डौ आउदै गरेको हेलिकप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना हुदाँ सवार सबै सात जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । नेपालमा हवाई दुर्घटना यो पहिलो पटक हैन । कुनै विरामीले ज्यान गुमाउनुपरेको पनि यो पहिलोपटक हैन […]
Post Tagged with basic_healthcare, equitable_distribution, nepal, rural_health
हस्पिटलबाट कोठातिर फर्कदै थिएँ। चर्को घाम र निथ्रुक्क भिजाउने पसिना, १० मिनटको बाटो पनि आज किन किन लामो लागिरहेको थियो। “ल आउनुस, तात्तातो मकै, ताजा मकै” बाटोको पारीपट्टी एउटा कुनामा बुढी बज्यै बर्बराउदैथिइन। ओहो, मकै खाने बेला पो हो क्यारे है आजभोलि त। घरबाट टाढा बसेपछि यस्ता कुराहरु पत्तै नहुने। सानो छँदा बारीबाट मकैका घोगा […]
धादिंगवेसी देखि करिव डेढ घण्टाको दुरीमा रहेको एउटा गाउँ – जुरेथुम । गुरुङ बस्तीको बाहुल्यता रहेको सो गाँउ सदरमुकाम नजिकै रहेर पनि बत्ती मुनिको अध्यारो झैँ रहेको छ । गत वैसाख १२ को विनासकारी भूकम्प गएको करिव १ महिना पछि पुग्दा त्यो सुन्दर गाँउ निकै अस्तव्यस्त रहेको थियो । केहि राहत सामाग्री र सामान्य प्राथमिक […]
ती गुरूङ दाइ र बुढी बज्यैको मुहारको खुसी!
घटना १: वैसाख १२ को भुकम्प पछिको चौथो दिनमा गोरखाबाट हेलीकप्टरमा उद्दार गरेर पोखरा ल्याइएका गुरुङ थरका एक युवक अस्पतालको बेडमा पल्टिरहेका थिए । निधारमा घाउको खत र हातमा प्लास्टर लगाएका उनको अनुहार निन्याउरो थियो । बाख्रा चराउन जाँदा कम्पनले ल्याएको ढिस्कोले पुरिएका उनि कुन स्थितिमा पोखरासम्म आइपुगे सम्झन सकिरहेका थिएनन । आफ्नै आँखा अगाडी […]
Post Tagged with after_one_year, earthquake, nepal, reconstruction
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु: अव सुधार्ने कि?
टाढाबाट हेर्दा तिन तले पक्की भवन, पार्किंग गरिराखेको एम्बुलेन्स र छिटफुट मान्छेहरु । हाम्रो गन्तव्यको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यहि हो भनेर ठम्याउन खासै समस्या परेन । गेटबाट भित्र छिर्दा स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर र अन्य कर्मचारी पहारिलो घाम ताप्दैथिए, सायद विरामीको चाप कम भएर होला । हामीले त्यस प्राथामीक स्वास्थ्य केन्द्र आउनुको कारण र उदेश्यहरु बताएपछि […]
Post Tagged with district_health_service_management, healthcare, nepal, rural_health
सधैजसो आज पनि उही हिड्दा हिड्दा थाकेको पुरानो जुत्ता, मैलोले रंग फेरिएको सर्ट, च्यातिन लागेको पाइन्ट र झोलाभरी जीवनका कागजरुपी उपलब्धीहरु बोकेर निस्किएँ । हिजोजस्तै अनिश्चित गन्तव्यको सयरमा दीनभरको लागि हिडेको थिएँ । उदेश्यविहिन भएर शहरका सडकहरु र गल्लीहरु डुल्नु मेरो दिनचर्या थियो । र मलाई बस यति थाहा थियो, म आज पनि त्यहि गर्दैछु […]